Ndị na-ere ahịa na-akpachara anya: Shodị Onlinezụ ahịa Ntanetị Na-adị Ngwa | Martech Zone
Na Tọzdee, Septemba 23, 2014 Douglas Karr
Ọtụtụ mmadụ bụ ịkwaga n'obodo ukwu ebe nnyefe otu ubochi abụghị naanị na o kwere omume, kama ọ dịla n'ọtụtụ obodo na United States.
Nkọwa Shozụ Ahịa Dijitalụ:
Ihe ngosi - mgbe onye ahịa zụtara n'ịntanetị mgbe ọ nyochachara ngwaahịa ahụ na ụlọ ahịa ahụ.
Ihe mgbawa mgbawa nke azụmaahịa ekwentị na-ewetara ndị ahịa ụlọ ahịa ahụ karịa na-eduga onye na-eri ihe na ụlọ ahịa. Na-agbanwe profaịlụ nke mkpọsa… oke ụlọ ahịa adịkwaghị mkpa, n'ọnọdụ obere ụlọ ngosi ndị ọzọ nwere njiri mara miri emi na enyemaka ngwaahịa. Ekwesighi m iguzo na ekwentị ma ọ bụ chegbu onwe m maka ngwaahịa enweghị ngwaahịa.
Nakwa, ọ na-agbanwe profaịlụ nke ọma maka ọpụpụ ahịa ọ bụla. Shopslọ ahịa dị n'ịntanetị ọ bụghị naanị na ha ga-asọmpi na ụlọ ahịa anụ ahụ dị nso, ha ga-asọmpi na ụlọ ahịa ọ bụla n'ịntanetị nwere ike ịnwe ọnụahịa dị ukwuu, mbupu n'efu, nnyefe ọsọ ọsọ, usoro nlọghachi dị egwu ma ọ bụ nnukwu ọrụ ndị ahịa. Nke ahụ pụtara nnukwu itinye ego na teknụzụ kama ịga n'ihu itinye brik na ngwa agha.
Zụta ngwaahịa na ntanetị bụ ihe ọhụrụ dị na mpaghara ụlọ ahịa zuru ụwa ọnụ na ọ bụ otu ọwa ahụ ka na-agba mbọ iji ya. Fọdụ ndị na-ere ahịa ahọrọla ịntanetị iji chụsoo akụkụ azụmahịa nke ecommerce mgbe ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-anọgidesi ike na nhọrọ ọdịnala, nhọrọ ụlọ ahịa anụ ahụ. N'ezie, ụfọdụ ndị na-ere ahịa gụnyere ụzọ abụọ nke nwere ike iduga na uto dị egwu.
Ihe omuma ihe a na achoputa uzo ahia nke ntaneti ma tinye uche na uto nke ya n'uwa dum. Shoppingzụ ahịa n'ịntanetị bụ nnukwu nsogbu maka ndị ahụ na-ere ahịa ọdịnala ahụ kpebiri na ha agaghị agagharị n'ịntanetị ka ha na ndị ahịa na-emekọ ihe egosi (na-agagharị na ngwaahịa ha instore) ma ọ bụghị n'ezie na-azụ ruo mgbe ha na-aga online.
Ihe omuma a site na SnapParcel na-amụkwa ihe ndị ga - eme n'ọdịnihu na ntanetị n'ịntanetị na ụwa niile.
SnapParcel na-enye ọrụ nnyefe site na Ireland ruo Canada, USA na Australia.
Tags: ecommercembupu n'efuịzụ ahịa n'ịntanetịọnụ ọgụgụ ịzụ ahịa n'ịntanetịstats ịzụ ahịa n'ịntanetịretailnnyefe otu ụbọchị ahụegosisnapparcelime websaịtị
Mar 13, 2015 na 3: 24 AM
Daalụ maka ịkekọrịta ozi na-akpali akpali gbasara ndị na-ere ahịa Kpachara anya: Shodị Onlinezụ ahịa Ntanetị Na-agba ọsọ. Nke a bụ ozi bara uru maka ndị na-agụ ntanetị na ntanetị. Debe ya ọmarịcha ọkwa dị ka nke a.